सलमान खानको ‘रेस ३’ हिट कि फ्लप ?
Wednesday,4Jul, 2018 5:18 PM
बलिउड स्टार सलाम खानको ‘रेस ३’ गत ईदमा रिलिज भएको थियो । प्रद्धर्शन भएको पहिलो सप्ताहमा फिल्मले राम्रो दर्शक पायो । फिल्ममा प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहुँदा दोस्रो हप्तामा भने फिल्म हेर्न आउनेको संख्या औँलामा गन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । फिल्मको जम्मा कमाई १ सय ६५ करोड भयो । कसैले पनि सोचेका थिएनन् कि सलमान खानको रेस ३ यतीमा मात्र सिमित हुनेछ । कारण थियो कि फिल्म धेरै नै खराब छ । रेमो डिसुजाले यती धेरै बजेट र स्टारडमलाई सम्हाल्नसकेनन् । रेस रिलिजको यो सब भन्दा ठूलो कमजोरी छ । सोशल मिडियामा पनि मान्छेहरूले रिस पोखे ।
प्रमुख प्रश्न : फिल्म हिट, औसत या त फ्लप छ ?
निर्माताको लागि यो फिल्म सुपर हिट छ । सलमान खान र रमेश तौरानी मिलेर यो फिल्मको निर्माण गरेका हुन् । सबै अधिकार वितरण गरेका उनीहरुले १०० करोड कमाए ।
वितरक र सिनेमाहरूको मालिकका लागि यो फिल्म भने फ्लप रह्योे । किनभने उनीहरुले यो फिल्मबाट नोक्सान पाए । उनीहरु बढी रकम दिएर आफ्नो सिनेमाका लागि कुक गराए तर त्यती रकम उठाउन सकेनन् ।
रेस ३ को व्यावसाय सलमान खानको इज्जत विपरित भयो । जरुरी छैन कि सालमान खानको हरेक फिल्म १०० करोड भन्दा बढी कमाउँछ । लागतको तुलनामा व्यवसाय गर्न जरूरी देखिन्छ । जब बढी रकम लिएर फिल्म बेच्नु हुन्छ तब जरुरी हुन्छ कि फिल्ममा लागेका सबैलाई फाईदा होस ।
फिल्मबाट प्राय जस्तो मान्छेहरुले घाटा व्योहोरेका छन । त्यसैले रेस ३ फ्लप फिल्म हो ।